XAQIIQOOYIN: Martin Vrijland
Michael P. Thijs H. Jos B. Dhammaan kiisaska dilalka warbaahinta waxay keenaysaa in si dhakhso ah loo hirgeliyo sharciyada naxdin leh ee saameeya qof walba
Filed in MAXAY TAHAY, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 29 May 2019	• 3 Comments
Shalay waxaanu goob joog u ahaa warbaahin ku saabsan kiiska Anne Faber, oo ah "aabihii Anne". Xaqiiqdii, waxay ahayd dood ka dhalatay murugo lagu guuleystay in la tirtiro xuquuqda aad u badan ee suurtogalka ah ee ka mid ah dilka noocan oo kale ah sida Michael P. "Aabaha Anne" aad buu u xanaaqsan yahay [...]
Michael P. Anne Faber Psyop 'Xalinta Dhibaatada Dhibaatada' ee booliska gobolka iyo xuquuqda yaryar
Filed in MAXAY TAHAY, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 28 Maarso 2019	• 18 Comments
Qodobo dhowr ah oo aan ku sharxay sababta dacwada Anne Faber, oo Michael P. uu ahaa shaqeeye, waxay u badantahay in PsyOp (hawlgalka nafsiga). Qalab lagu riixo sharciyo badan. Maanta Daanyeerka ayaa si cad uga soo baxaya mawduuca. Caddeynta Dhibaatada ugu weyn, Falcelinta, Xal u helida Optima forma. Waxaad abuureysaa [...]
Natiijada Anne Faber oo keli ah sida saadaalin badan TBS oo aan lahayn cilmi-baaris cilmi-nafsi
Filed in MAXAY TAHAY, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 4 July 2018	• 2 Comments
Inkastoo dad badan oo aan rabin in wax weyn sida in ka mid ah Anne Faber iyo Michael P. suurto gal abid ayaa laga yaabaa hawlgal nafsi (PSYOP) - ku riixayo tallaabooyin cusub - muuqataa ujeedada kiiskan saadaaliyay u dhow isla markiiba kadib kiiskan si aad u muuqata. Waxaan [...]
Maxay Michael P. iyo Anne Faber ganacsiga u leeyihiin inay la sameeyaan Koobka Aduunka? Win 1 million!
Filed in MAXAY TAHAY, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 15 June 2018	• 6 Comments
Haddii aad rabto in aad wax saameyn weyn leh u tagto si aan caddaalad ahayn, had iyo jeer waa wanaagsan tahay inaad taas sameyso dhacdo weyn. Dadku waxay ku mashquulsan yihiin munaasabadan waxayna weli eegaan waxa soo maraya, laakiin awoodda fikirka fekerka waa horeba ama qayb ahaan daalnaa. Ka dibna waxaad qabtaa gabagabo [...]
Xaalad aan sharci aheyn: Cadaymaha DNA, warbixinta forensic iyo warbixinta ku saabsan Anne Faber iyo Michael P. aan lagu soo bandhigin dacwadda
Filed in MAXAY TAHAY	by Martin Vrijland	on 12 June 2018	• 15 Comments
Weligaa ma ku soo aragnay dacwad ah, kaas oo lagu eedeeyey fal dembiile ah oo keliya oo lagu xukumay oo keliya iyada oo ku saleysan qirasho? Dabcan dhamaanteen waa inaan aaminsanahay in Michael P. uu yahay kufsi iyo kufsi aad u xun iyo in Anne Faber oo macquul ah uu raacay baaskiil aan waxba galabsan oo fiidkii marka si cad u xun [...]
Sababta Anne Faber ay ugu talagashay mootada Michael P. ee jidka hawada ee Soesterberg?
Filed in MAXAY TAHAY	by Martin Vrijland	on 12 June 2018	• 24 Comments
Warbixinta dhegeysiga dacwada kufsiga iyo dilka Anne Faber ayaa si cad u muujinaysa in Michael P. (Panhuis) ay ku qasbeen Anne inuu ku fariisto mootada. (Akhri isbeddelkan / hagaajinta sheekada sheekada). Munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen [...]
Qaar ka mid ah kiisaska la arki karo ee dacwadda (dabeecada) Michael P. oo ku wareegsan kiiska Anne Faber
Filed in MAXAY TAHAY	by Martin Vrijland	on 11 June 2018	• 16 Comments
Way adagtahay inaadan si toos ah u soo bandhigin dacwadda, sidaa daraadeed waa in aan sameeyaa farriimaha twitter-ka ee Saskia Belleman van de Telegraaf. Marka la eego in aan dibedda ku noolahay oo aan ka bixi karin kharashka safarka, taasi waa sida keliya. Hase yeeshee, [...]
Anne Faber bogga hore ee Telegraaf, halkaas oo uu saaxiibkeed Nathan Fidder iyo saaxiibadaa ku xusan?
Filed in MAXAY TAHAY	by Martin Vrijland	on 2 June 2018	• 17 Comments
Waxay ahayd olole aad u balaadhan oo ku saabsan Anne Faber oo u muuqday in uu jebinayo maanta, si cad u weeraray fikradda ah in wax walba laga yaabo inay ku saleysan yihiin psyop. Laakiin qof kasta oo akhrinaya maqaalkii daabacay Telegraaf ee maanta, waxay arki doontaa waxyaabo yar. Munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen [...]
Anne Faber ayaa markii ugu horeysay lagu aasay, ka dibna la qabadsiiyay, iminka si lama filaan ah loogu aasay. Cilad aabahay Wim Faber?
Filed in MAXAY TAHAY, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 27 May 2018	• 9 Comments
Waxaan ku dhejin karnaa maqnaanshaha wargeyska, laakiin kiis aad u culus sida kiiska Anne Faber, waxay u muuqataa aniga inaadan ku wareersanayn aaska gubashada. Haatan waxaan dhihi karnaa in Telegraaf ay qalad tahay marar badan, laakiin kiiskiisa maqan sida Anne Faber waxaan u maleynayaa inay tahay dhameystir [...]
Michael P. ayaa si ballaaran u shaaciyay dilka Anne Faber: wararka been abuur ah ama xaqiiqda ah?
Filed in MAXAY TAHAY	by Martin Vrijland	on 11 January 2018	• 24 Comments
Yesterday warbaahinta ayaa sheegay in Michael P. (kuwaas oo ay hadda cid walba ayaa og P ku taagan tahay Panhuis) kordhin ogaan lahaa dilka Anne Faber. Taasi waxay si lama filaan ah u soo bixi kartaa inta lagu guda jiro tartanka ciyaaraha. Shirkan oo ah kii ugu horreeyay oo noociisa ah oo lagu qabtay magaalada Muqdisho,
Guud ahaan Wadarta: 1.352.268
Martin Vrijland op Trump, Q-Anon iyo 'nadiifinta fikirka' qoto dheer '(Robert Jensen, Janet Ossebaard)
Future op 'Fashilka cabal' waa wax aan micno lahayn oo waa kuma 'Q Anon' Inoffizieller Mitarbeiter (IMB'ers)?
Peter Steegmans op Trump, Q-Anon iyo 'nadiifinta fikirka' qoto dheer '(Robert Jensen, Janet Ossebaard)